ခန္ဓါကိုယ်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ပေးခြင်း အကျိုးကျေးဇူးတွေ - Hello Sayarwon
ခန္ဓါကိုယ်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ပေးခြင်း (Physiotherapy)ဟာ ဆေးပညာရဲ့ တစိတ်တဒေသ ဖြစ်ပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်နာကျင်မှုတွေကို ဖြစ်စေတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာအများအပြားကို ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။
ဟုတ်ပြီ ခန္ဓါကိုယ်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ပေးခြင်း (Physiotherapy) က ဘယ်လိုပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းကုသပေးနိုင်မလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
အရိုးအကြောကြွက်သားဆိုင်ရာ ပြဿနာများ (ကြွက်သား၊အရွတ်၊အရွတ်ကြော၊အဆစ်အမြစ်၊အရိုး စသည်)
ခြေဖဝါးမှာကွေးနေတဲ့နေရာမရှိတော့ဘဲ တဖြောင့်တည်းဖြစ်သွားတာမျိုးကို ခြေဖဝါးပြားခြင်း လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီလို ပြားနေတာကြောင့် သင်မတ်တပ်ရပ်တဲ့အခါ ခြေဖဝါးဟာ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ တပြေးတည်း ဖြစ်လို့ နေပါလိမ့်မယ်။
သင်ကလေးဘဝမှာ အဆိုပါ ခြေဖဝါးအကွေးလေးဟာ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း မရှိသေးဘဲ အသက်ကြီးလာမှသာ တဖြည်းဖြည်း ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ ဒါပေမယ့် တချို့လူတွေမှာ ခြေဖဝါးအကွေးလေးဟာ လုံးဝဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမရှိပါဘူး။
ထိခိုက်ဒါဏ်ရာ ဒါမှမဟုတ် အခြားသော ပြဿနာတွေကြောင့်လည်း ဒီအခြေအနေကို ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။ ခြေဖဝါးပြားရင် ခြေထောက်၊ခြေကျင်းဝတ် ဒါမှမဟုတ် နောက်ကျောတို့မှာ နာကျင်မှုကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။
ခြေဖဝါးပြားခြင်းကို ခန္ဓါကိုယ်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ပေးခြင်း (Physiotherapy) နဲ့ ကုသပေးနိုင်ပါတယ် (ဥပမာ သင့်တော်တဲ့ ဖိနပ်စီးခြင်း၊အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ ဖိနပ်အတွင်းသားကို အသုံးပြုခြင်း စသည်)။ ဒါမှသာ သင့်ခြေထောက်ကို နေသားတကျရှိစေဖို့ ကူညီပေးနိုင်သလို အခြေအနေပိုဆိုးမလာအောင်လည်း တားဆီးပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခြေထောက်ကြွက်သားတွေ၊အရွတ်တွေကို ဖြေလျှော့ပေးခြင်း၊ဆန့်ပေးခြင်းတွေကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အဆစ်အမြစ်တွေရောင်ရမ်းတဲ့အခါ နီရဲနာကျင်ခြင်း၊ဖောင်းကားရောင်ရမ်းခြင်း၊တောင့်တင်းခြင်းတို့ကို ခံစားရမယ့်အပြင် လှုပ်ရှားသွားလာမှုကိုပါ အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမှာ ခန္ဓါကိုယ်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ပေးခြင်း (Physiotherapy) အားဖြင့် အဆစ်အမြစ်တဝိုက်က ကြွက်သားတွေကို သန်စွမ်းအားကောင်းစေတဲ့အတွက် လှုပ်ရှားသွားလာမှုကို အဆင်ပြေစေပါတယ်။
အဆစ်အမြစ်တွေကို နေသားတကျရှိနေအောင်၊တည်ငြိမ်အောင် ထိန်းထားဖို့အတွက် လိုအပ်ရင် သိုင်းကြိုးတွေကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အကိုက်အခဲပျောက်စေတဲ့ ဓါတ်ပစ္စည်းတွေ ခန္ဓါကိုယ်ကနေ သဘာဝအတိုင်း ထွက်ရှိလာစေဖို့အတွက် အပ်စိုက်ခြင်းကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ယောဂကျင့်ခြင်းဟာလည်း သင့်အဆစ်အမြစ်တွေကို ပျော့ပြောင်းစေနိုင်ပါတယ်။ စနစ်ကျစွာ နှိပ်နယ်ပေးခြင်းဟာလည်း အဆစ်အမြစ်တွေမှာ သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေတဲ့အတွက် နာကျင်ခြင်းဝေဒနာကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
ကြွက်သားနဲ့ အရိုးအကြောအဆစ်တွေထိခိုက်ခြင်းဟာ အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပေမယ့် အားကစားလုပ်ရင်း ဒါမှမဟုတ် လုပ်ငန်းခွင်မှာ ထိခိုက်တာက အများဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ ပြဿနာတွေဟာ အရိုးကျိုးခြင်း၊ခြေခေါက်ခြင်း၊အကြောညပ်ခြင်း နဲ့ အခြားသော အခြေအနေတွေကို ဦးတည်စေပြီး သင့်အနေနဲ့ နာကျင်မှုကို ခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရောင်ရမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ပုံမှန်အတိုင်း လှုပ်ရှားသွားလာလို့မရခြင်း စတာတွေကိုလည်း ရင်ဆိုင်ရပါမယ်။ ထိခိုက်မိတဲ့နေရာကို တတ်နိုင်သမျှ မလှုပ်ရှားဘဲ နေပေးခြင်းအားဖြင့် အခြေအနေပိုဆိုးလာမှာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
သင့်အရိုးအကြောကြွက်သားတွေ ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လည်ကောင်းမွန်၊လှုပ်ရှားနိုင်စေဖို့အတွက် လေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးမျိုးပါဝင်တဲ့ ခန္ဓါကိုယ်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခြင်းနည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ သင့်ဆရာဝန်က အကြံပြုလမ်းညွှန်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ရေခဲကပ်ခြင်း၊ရေခဲပါဝင်တဲ့ ဖြန်းဆေးအသုံးပြုခြင်းတို့ဟာလည်း နာကျင်မှုကို ယာယီသက်သာစေပါလိမ့်မယ်။
အနာဖြစ်နေတဲ့နေရာကို သွေးကောင်းကောင်းမရောက်ဖူးဆိုရင် အနာကျက်နှေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ရေနွေးကပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် သွေးကြောတွေကို ကျယ်လာစေတဲ့အတွက် အနာဆီကို သွေးများများ ရောက်စေပြီး အနာကျက်မြန်စေပါတယ်။
တကယ်လို့ သင်ဟာ လေဖြတ်ဝေဒနာကို ခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုရင် သင့်ဦးနှောက်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတချို့ဟာလည်း ထိခိုက်သွားနိုင်တဲ့အတွက် သင့်အနေနဲ့ ပုံမှန်အတိုင်း လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နာကျင်မှုတွေ ခံစားရမယ်၊ စကားပြောရခက်မယ်၊လုပ်ဆောင်မှုအသစ်တွေကို သင်ယူနိုင်စွမ်း ပျောက်ဆုံးသွားမယ် စသဖြင့်ပေါ့။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ Physiotherapy လို့ခေါ်တဲ့ ခန္ဓါကိုယ်ကို လေ့ကျင့်ပေးခြင်းဟာ အရေးပါလာပါတယ်။
စနစ်တကျမှန်ကန်စွာ လမ်းညွှန်မှုပေးခြင်း၊အာရုံစူးစိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်း နဲ့ ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ခြင်းတို့ဟာ Physiotherapy အောင်မြင်ဖို့ အဓိကသော့ချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေချိုးခြင်း၊အစားအသောက်စားခြင်း၊အဝတ်အစားဝတ်ခြင်း အစရှိတဲ့ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို တတ်နိုင်သမျှ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်အောင် Physiotherapy က လေ့ကျင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ စကားပြန်ပြောနိုင်အောင်လည်း Physiotherapy က ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ခန္ဓါကိုယ်ကို လေ့ကျင့်ပေးခြင်းဟာ ရိုးရှင်းတဲ့ လုပ်ဆောင်မှုလေးတွေနဲ့ စတင်မှာဖြစ်ပြီး တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပိုမိုခက်ခဲတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ဆက်လက်လေ့ကျင့် လုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ အိပ်နေရင်းနဲ့ ခန္ဓါကိုယ်အနေအထားကို ပြောင်းတာ၊ထထိုင်တာ၊မတ်တပ်ရပ်တာ၊လမ်းလျှောက်တာ စသဖြင့် တဆင့်ချင်း တက်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကနဦးမှာတော့ အထောက်အကူပြုပစ္စည်းလေးတွေ အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပြီး ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ ဘာပစ္စည်းမှ သုံးစရာမလိုဘဲ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စနစ်တကျ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သွားရင် တိုးတက်မှုတွေကို တဖြည်းဖြည်းမြင်လာရမှာပါ။
ကျောရိုးကွေးခြင်း၊ကျောရိုးဆစ်ခွေမှာ ပြဿနာဖြစ်ခြင်း၊ကျောရိုးအတက်ထွက်ခြင်း စတာတွေဟာ ခန္ဓါကိုယ်ကို လေ့ကျင့်ပေးခြင်း (physiotherapy)နဲ့ ကုသပေးနိုင်တဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောရိုးကွေးခြင်းအတွက် ကျောရိုးပုံစံကို ပြန်လည်တည့်မတ်ပေးမယ့် သိုင်းကြိုးတွေကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဒီသိုင်းကြိုးတွေဟာ သင်လှုပ်ရှားတဲ့အခါ ကျောရိုးပုံစံမှန်နေအောင် ထိန်းပေးထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျောရိုးဆစ်ခွေပြဿနာအတွက် ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ physiotherapy နည်းလမ်းတွေကတော့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊အနာသက်သာစေဖို့ ရေခဲ/ရေနွေး ကပ်ခြင်း၊ကြွက်သားတွေ သန်စွမ်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့ ကျောရိုးဆစ်ခွေဆီ သွေးကောင်းကောင်းရောက်အောင် ပြုလုပ်ပေးခြင်း စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျောရိုးအတက်ထွက်ခြင်းအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊လက်နဲ့ပြုပြင်ပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုရင် အဆစ်နာတာကို သက်သာစေမှာပါ။ အထက်ပါ လေ့ကျင့်ခန်းတွေအားလုံးဟာ ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ နေရာကို ထောက်မပေးထားတဲ့ ကြွက်သားတွေကို အားကောင်းသန်မာစေခြင်း၊ခန္ဓါကိုယ် ပျော့ပြောင်းစေခြင်း၊ခန္ဓါကိုယ်အနေအထား မှန်ကန်စေခြင်း အစရှိတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ပေးခြင်းအားဖြင့် သင့်ခန္ဓါကိုယ်အပေါ်ဖိစီးမှုတွေကို လျော့နည်းသက်သာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်မှုခံယူပြီးတဲ့နောက်မှာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် သိုင်းကြိုးဝတ်ဆင်ဖို့ ဆရာဝန်က လိုအပ်သလို ညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာ သင့်ခန္ဓါကိုယ်ကို ပိုမိုပျော့ပြောင်းစေခြင်း၊ပိုမိုလှုပ်ရှားလာနိုင်ခြင်း၊ကြွက်သားတွေ ပိုမိုသန်မာလာခြင်း အစရှိတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ပေးစွမ်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခွဲထားတဲ့ ဒါဏ်ရာကျက်တာနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။ သင်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားသွားလာမှုတွေ ပြုလုပ်တဲ့အခါ ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ အနေအထား မှန်ကန်စေဖို့ သိုင်းကြိုးတွေက ကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ခန္ဓါကိုယ်လေ့ကျင့်လှုပ်ရှားခြင်း (Physiotherapy)ဟာ ရောဂါအခြေအနေအမျိုးမျိုးကို သက်သာအောင် ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။Physiotherapy ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်တွေကတော့ ကြွက်သားတွေကို ပိုမိုသန်စွမ်းလာဖို့၊ခန္ဓါကိုယ်နေရာ အများအပြားမှာ ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ ပြဿနာတွေကို ကူညီဖြေရှင်းပေးဖို့၊အာရုံကြောညပ်တာတွေ၊ဖိခံထားရတာတွေကို ကူညီဖယ်ရှားပေးဖို့နဲ့ နာကျင်မှုတွေကို လျော့ပါးသက်သာစေဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကုသမှုကို မရွေးချယ်ခင်မှာ ကြိုတင်ပြီး သေချာလေ့လာဖို့တော့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
Physical Therapy – When Physical Therapy Can Help. http://www.webmd.com/pain-
management/tc/physical-therapy- when-physical- therapy-can- help. Accessed January 12, 2017.
Physical Medicine and Rehabilitation. http://www.mayoclinic.org/departments-
centers/physical-medicine- rehabilitation/overview. Accessed January 12, 2017.
Physical Therapy – Types of Physical Therapy. http://www.webmd.com/pain-
management/tc/physical-therapy- types-of- physical-therapy#2. Accessed January 12, 2017.
Flat feet. http://www.nhs.uk/conditions/flatfeet/Pages/Introduction.aspx. Accessed January 12,
What Are Fallen Arches? http://www.webmd.com/pain-management/what- are-fallen-
arches#1. Accessed January 12, 2017.
Treatment Options for Bone Spurs. http://www.spine-
health.com/conditions/arthritis/treatment-options- bone-spurs. Accessed January 12, 2017.
treatment/treatment/txc-20169117. Accessed January 12, 2017.
Post-Stroke Rehabilitation. https://stroke.nih.gov/materials/rehabilitation.htm. Accessed